Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Cedric Soares Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Ihe omuma anyi nke Cedric Soares na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya (Filipa Brandão), ada (Siena), ibi ndu, ndu nke onwe ya, wdg.
Na nkenke, anyị na-egosipụta Life Life nke ndị bọọlụ Portuguese nke mere aha ya na bọọlụ mba na otu. Versiondị Cedric nke a zuru ezu na-amalite site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu ahụ.
Iji mee ka agụụ nke autobiography gị sie ike na ọdịdị nke Cedric Soares Biography, lee ndụ nwata ya na mbili ịrị elu. I kwenye na m na achikota Bio ya.
Ihe omuma nke Cedric Soares. Lee ndụ nwata ya na mbili ya.
Mụ na gị maara na ọ bụ onye a pụrụ ịdabere na ya, onye nweburu ikike ịme obe na ịkwaga.
N'agbanyeghị otuto ahụ, anyị chọpụtara - na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ Cedric Soares Life Story. Anyị akwadebela ya maka ịkụ bọl. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Akụkọ Cedric Soares nke umuaka:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha zuru oke Cédric Ricardo Alves Soares CvIH ComM. A mụrụ ndị na-asụ Portuguese na 31st ụbọchị August 1991 na obodo Singen, Germany.
Per Mertesacker Child Story Plus Ihe Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Cedric Soares bịara n'ụwa dịka otu n'ime ụmụ nwoke abụọ (ya onwe ya na Kevin Soares) amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya mara mma, ndị esere ese ebe a.
Ndị nne na nna Cedric Soares. Ndị na-agba ọsọ nwere mana nke mama ya.
Ọ bụ ezie na a mụrụ ya na Germany, nne na nna Cedric Soares si Portugal. Ha bidoro ịlaghachi ala nna ha n'oge obere Cedric dị afọ abụọ.
Mgbe ha laghachiri ụlọ, ezinụlọ ahụ nọrọ na Portugal. Cedric tolitere n'akụkụ nwanne ya nwoke nke okenye, onye aha ya bụ Kevin.
Maka ikike aka nri, ụbọchị ụmụaka juputara na ncheta dị mma na ezigbo oge. O gosiputara ndi ozo ya foto ndi ozo banyere ya na Kevin gosiputara otu nnukwu nwanne ya siri diri ndu ya. Cedric kpọrọ ya - 1990 vibes.
Cedric na nwanne ya nwoke nke okenye bụ Kevin bụ ndị enyi kachasị mma n'oge ha bụ nwata.
Nnukwu Nrọ Childhoodmụaka:
Cedric malitere inwe agụụ bọl site na nwata na ụlọ akwụkwọ ọta akara. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ rọrọ nrọ ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ na-anọchite anya obodo ya - Portugal.
Ezigbo Ezinụlọ Family Cedric:
Ndị na-agba ọsọ sitere na ndị dị umeala n'obi, na ekele maka football, ọ bụ ugbu a nnukwu nwa, onye kpakọbara akụ na ụba. Cedric sitere na nzụlite ezinụlọ nke etiti.
Dị ka ọtụtụ ndị ọrụ gọọmentị Portuguese na-arụ ọrụ, Nna ndị egwuregwu bọọlụ nwere agụmakwụkwọ kacha mma ma ghara ịlụ ọgụ na ego.
Cedric wepụtara foto nwata a nke papa ya ka ọ hapụ ya na Kevin n'ụlọ akwụkwọ tupu ọ gaa ọrụ ya. O gosipụtara mmalite ya dị umeala n'obi, o mekwara nke ahụ iji nwee ekele maka papa ya maka ilekọta ezinụlọ ya.
Zute Cedric Soares Papa ka ọ na-akpọrọ ya na Kevin ụlọ akwụkwọ tupu ha agaa ọrụ.
Ezigbo ezinụlọ Cedric Soares:
Nwere ike ịkpọ ya German Portuguese n'ihi na ọ bụ Portuguese mụrụ na Germany. Singen (ebe amụrụ Cedric Soares) bụ obodo mepere emepe nke dị na ndịda Jamanị, na mgbago mgbago ugwu Germany na Switzerland.
Ndị nne na nna bọọlụ bụ ndị mbịambịa Portuguese ndị ezinụlọ ha hapụrụ obodo ha gaa Germany ogologo oge tupu ọmụmụ ya.
Cedric Soares Mmụta:
Na Portugal, ya na Big Nwanna Kevin, gụrụ akwụkwọ. Site na afọ atọ rue ise, Cedric bidoro ụlọ akwụkwọ praịmarị ya na Portugal. Agụmakwụkwọ bụ isi agwakọtara ma ụlọ akwụkwọ na ọtụtụ football-niile n'ọchịchọ ịchụso nrọ nwata.
Cedric Soares Football Akụkọ:
Mgbe oge ruru (mgbe ọ dị afọ asatọ), nne na nna na-eto eto kpọgara ya Alcochete. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, Cedric nwere Sporting CP agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke ọ gafere na agba na-efe efe.
N'okpuru ebe a, Cedric nwere obi ụtọ so na ndepụta ụmụ nwoke nwere obi uto ka a nabata ha na Sporting de Lisboa - n'afọ 1999.
Nke a bụ afọ 1999 mgbe Cedric Soares sonyeere Academia Sporting.
Ndụ mbido na Sporting:
Site na mmalite, nwatakịrị ahụ nwere mkpebi siri ike ịchụso nrọ nke nwata. Onye ọ bụla hụrụ ya n'anya, Cedric na-ebute ụzọ mgbe niile n'igosipụta ịgba bọọlụ ya na-enweghị oke.
Igwe kpakpando na-eto eto nwere ọganihu ngwa ngwa site na otu ọgbọ agụmakwụkwọ. N'ihi ntozu okè ya na ụdị egwuregwu ya, ọ bụ ụdị nwatakịrị a na-etinye mgbe niile ka ọ na-eche ndị okenye na ndị egwuregwu buru ibu ihu. Na njedebe, Cedric na-aka mma mgbe niile.
Cedric Soares nwere ihe ịga nke ọma na ụdị ndị iro Lukaku - ndị tọrọ ya, buru ibu ma sie ike karịa ya.
Ihe nwatakịrị na-eme na mkpebi siri ike ghọrọ akụ ya bara uru ka ọ na-agafe na nwata. Dị ka atụ anya, ịrụsi ọrụ ike Cedric Soares abịaghị na-enweghị ụgwọ ọrụ na nsọpụrụ nye aha ya.
N’ịbịaru afọ iri na ụma ya, nwa anyị nwoke malitere inyere ndị Green na ndị ọcha aka inweta nnukwu trophi. Ọganiihu ya na ọkwa ntorobịa Sporting yiri nke Cristiano Ronaldo na Rafael Leao.
Cedric Soares nwetara ọtụtụ ihe ịga nke ọma na Academia Sporting.
Ọganihu Virgo nwere mere ka ụjọ jide njikwa nke ndị ntorobịa mba Portugal. N'ịbụ ọ theụ nke ezinụlọ ya, a kpọrọ Cedric ka ọ sonyere n'akụkụ U16 nke Portugal.
Akụkọ Cedric Soares - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Onye na - ebili azụ gara aga nọrọ afọ iri na abụọ (12 - 1998) na Academia Sporting tupu ọ nweta akụkụ mbụ nke nrọ nwata. N'ime afọ World cup ahụ, Cedric bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara na Sporting CP.
Cédric mere nke ọma na Primeira Liga na ndị otu mbụ na 8 May 2011. Otu afọ ahụ, ọ ghọrọ otu n'ime ama ama ama ama na 2011 FIFA U-20 World Cup na Colombia. Cedric nyeere Portugal aka ịmechaa asọmpi a na nke abụọ.
Kingchọ Ahụmahụ angwọ
N'ime oge 2011-12, Cedric, ya na onye otu Adrien Silva nyere ya ego na ụlọ ọrụ Académica nke kachasị elu. N'ebe ahụ, ọ na-egwuri egwu mgbe niile ma nyere ndị otu aka mmeri oge Taça de Portugal.
N'ikpeazụ, mgbe ọ kwụrụ ụgwọ ya site na mbinye ego, Cédric laghachiri n'akụkụ Lisbon. Ọ ghọrọ nhọrọ mbụ na afọ ndị na-esote n'okpuru ọtụtụ ndị njikwa. N'ibubata ahụmahụ ego ego nke Académica na ụgbọ mmiri, nwa anyị nwoke nyere Sporting aka inweta mmeri Taça de Portugal.
Ọrụ Portuguese maka Sporting dugara otu ndị otu mba site n'aka njikwa Fernando Santos. Ọbụghị naanị nke ahụ, egwuregwu ya malitere na-adọta ọtụtụ mmasị site na klọb bọọlụ gburugburu Europe.
Cedric Soares Bio - Akụkọ Ọma:
Na 18 June 2015, kpakpando na-arị elu hapụrụ ezinụlọ ya na Portugal maka ndụ ọhụrụ na England. Ekwuputara Cédric dị ka nke abụọ oge mbinye aka na Southampton FC.
Azụ azụ dị egwu na-adị ngwa iji nwee mmetụta na klọb n'okpuru Ronald Koeman. Enyemaka a nwetara aha ya maka UEFA Euro 2016.
UEFA European Championship Mmeri:
Onye njikwa Fernando Santos ahọrọ Cédric dị ka otu n'ime nhọrọ nhọrọ aka nri ya maka ndị otu UEFA Euro 2016. Malite na onye otu Southampton José Fonte na gburugburu 16, ọ jigidere ọnọdụ ya ruo na njedebe.
N'ikpeazụ, Cedric mezuru nrọ nwata ya niile. N’akụkụ Rui Patrício, Nkem, Rafa Silva (SC Braga), André Gomes (Valência) na Raphael Guerreiro (Lorient), o nyeere mba ya aka iru na njedebe. Ọ kwụsịghị ebe ahụ; Portugal nwetara okpueze dịka ndị mmeri.
Nsogbu Inter Milan:
Na 26 Jenụwarị 2019, Cédric gara n'ihu na Nerazzurri. Ọ webatara ahụmịhe Euro 2016 ya niile na-egwu na klọb, na-enyere ha aka n'ọtụtụ mmeri ha.
-esonụ Mikel Arteta si nhọpụta gburugburu Disemba 2019, onye njikwa ọhụụ ọhụụ chọrọ ezigbo ikike aka azụ dị ka nkwado ndabere na Hector Berllerin. Otu ọnwa mgbe e mesịrị, Arsenal binyere aka na nkwado Cedric Soares na mbinye ego - n'oge windo mbufe nke Jenụwarị 2020.
Onye mmeri Euro 2016 nwere ahụmahụ ghọrọ ihe karịrị aka nri maka ndị Gunners. Ọdịmma ya hụrụ ya ka ọ na-ejuputa Kieran Tierney n'oge mmerụ ahụ ya.
Ya na ndị Gunners, Cedric rọrọ nrọ FA Community Shield wee gaa n'ihu nweta ya na Arsenal.
Ruo ugbu a, nkwụsi ike Mr dị mma maka ọgbakọ na mba. Site na nkwekọrịta ogologo oge na Arsenal, ọ bụ n'ezie akụkụ nke ịgbaso Emmanuel Eboue si nwere mmasị ịghọ ụlọ akụkọ (aka nri). Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Biography bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Banyere Filipa Brandão, Nwunye Cedric Soares:
Amụrụ na 11th nke Disemba 1989 (afọ abụọ toro), ọ bụ onye zuuru obi nke kpakpando Portuguese.
Filipa Brandão bụ onye a ma ama na Instagram nke na-enweta ọ joyụ n'iji ya ihe karịrị ụmụazụ 40,000 jiri foto ndị na-adịghị mma.
Filipa na Cedric malitere ịlụ na afọ 2015 n'oge ọ sonyere Southampton. Mgbe ha jikọtara ọnụ ruo ọtụtụ afọ, onye mmeri Euro 2016 kpebiri iwepụta nnukwu ajụjụ.
Cedric Soares Filipa Brandão Agbamakwụkwọ:
Onye na-agbachitere ya na nwunye ya Portuguese, bụ onye dị afọ abụọ karịa ya, mere agbamakwụkwọ ha na Sintra dị nso na Lisbon gburugburu June 2019. Ndị bịara ya bụ ezigbo ndị enyi na ndị ezinụlọ nke Cedric Soares na Filipa Brandão.
Otu afọ na ọkara mgbe agbamakwụkwọ ha gasịrị, Arsenal Star na nwunye ya mara mma juru ndị fan anya mgbe ha kpughere nwa mbụ ha aha ya bụ Siena. Naanị Cedric na Filipa maara (gbakwunyere ndị ọzọ), o debere afọ ime ya nnukwu ihe nzuzo. Nke a bụ Cedric na - ejide nwa ya nwanyị Siena Soares obere oge mgbe ọ bịara n'ụwa.
Lee Cedric na ụyọkọ ọ ofụ ya Siena Soares.
Ndụ nke Onwe Cedric Soares:
E nwere ụfọdụ ndị ọgba bọọlụ bụ ndị, mgbe ha ghọrọ ndị ama ama na ndị bara ọgaranya, enweghị ike ịhụ ha na ebe nkịtị.
Nke a abụghị ikpe na Cedric Soares. Oge zuru ezu bụ ụdị nke na-akwado naanị ụlọ ahịa ọ bụla. N'ebe a, a na-ese ya na-ewere nri kacha amasị ya na Cappuccino.
Cedric Soares anaghị ahapụ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ kachasị amasị ya.
Nnukwu Nkịta hụrụ n'anya:
Ọzọkwa, na ederede onwe gị, Cedric bụ nnukwu anụmanụ na-ahụ n'anya. Ọ na-echebara nkịta ya echiche n'ụzọ ziri ezi. Ha abụọ (dị ka e sere n'okpuru) abụrụwo ihe dị ukwuu na ndụ ya.
Otu n’ime Cedric Soares Dog (nke ojii) ka akpọrọ Romeu. Ha enweghị ike ịkọwa.
Cedric kpọrọ Romeo (nkịta gbara ọchịchịrị) onye ọzụzụ ọzụzụ dị ike. Nke a bụ vidiyo ebe onye na-azụ azụ jiri ohere ihu igwe mara mma maka ọzụzụ ezighi ezi nke nkịta ya-kwa, oge ọzọ ya na Onye Ọzụzụ Atụrụ German nọ.
Ndụ Cedric Soares:
Nke mbụ, ọ bụ ụdị onye na - agba bọọlụ na - egosi ndị egwuregwu etu o si bi. Na ngalaba ndụ Cedric Soares, anyị ga-ekpughere akụ ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ndị ọ na-enweta ego na-abanye n'ime.
Cedric Soares Cargbọ ala:
Onye na - agba bọọlụ na ụkwụ ya na - eri ihe na - adị ka ọ dabara. Ohere Cedric anọrọla ebe ahụ ịzụta ụgbọ ala ọ bụla. Ọ bulitere oge a na Instagram na isiokwu ya - Bomụaka na ihe egwuregwu ha.
Nke a bụ Cedric Soares 'Car.
Hụrụ n'anya maka helikopta:
N'adịghị Neymar, onye aka ya ahaziri ya, Cedric enweghị nke ya kama ọ na-enwe ụgwọ ịgbazinye ndị na-egbusi onwe ha maka azụmahịa na ihe kpatara ya. Anyị na-ahụ ya ebe a, na-ese n'elu otu ọ chọrọ ịbanye.
Lọ Cedric Soares:
Thelọ ndị Portuguese nwere ọmarịcha mbara ihu mara mma nke bara uru maka ego football ya. Ọzọ, ọ dịtụ obi karịa posh n'ile anya. Cedric na-etinye oge ka ukwuu n'ụlọ ya na-ekiri egwuregwu.
Nke a bụ ụlọ Cedric Soares.
Cedric na Filipa bụ ndị na-akwado ezumike ezumike. Ha nwere mmasị ịkụ ụfọdụ n'ụsọ osimiri ndị a ma ama na Europe ebe anyanwụ na-achasi ike na-atọ ha ụtọ.
Maka ndị Portugal na-azụ azụ, ezumike mmiri mmiri na-enweghị ike mezue ma ọ bụrụ na ịnweghị ịnya ụgbọ elu.
Ndụ Ezinụlọ Cedric Soares:
Maka nwa amaala German Portuguese, ịhụnanya ọ na-eso ezinụlọ ya ekerịta bụ otu n'ime ngọzi kasịnụ nke ndụ. Ọ bụ otu nke enweghị ego bọọlụ nwere ike ịgbanwe.
Akụkụ a nke Cedric Soares Bio na-egosipụtakwu eziokwu gbasara ezinụlọ ya. N’etughi oge, ka anyi bido.
Ha niile na-etolite otu ezinụlọ nwere obi uto.
Banyere Cedric Soares Nna:
Anyị na-akọwa ya dị ka Nna, onye ghọrọla mkpụrụ nke ndọgbu na ọrụ ike ya. Ná mmalite, ọ hapụrụ Cedric na-eto eto ịgbaso nrọ ya mgbe ọ ghọtara na nwa ya nwoke chọrọ football ma ọ bụ ihe ọ bụla.
N'oge ụfọdụ, nna Cedric Soares na-aga nleta London. Ọ na-agagharị na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke obodo ahụ ma na-etinye oge dị mma na Cedric, Filipa na Siena.
Zute Papa Cedric Soares. Nwoke nke churu aja n'ihi ya.
Banyere Cedric Soares Nne:
Nnukwu nne so na ndị mepụtara otu ndị mmeri nke Euro 2016. N'ezie, nwanyị a abụghị otu.
Mama Cedric sere foto a na Madame Tussauds Museum dị na London. Site na ihe o yiri ka ọ bụ, ọ bụ onye ofufe Barrack Obama.
Zute nne Cedric Soares. Ọ bụ nnukwu onye na-akwado Obama.
Banyere Cedric Soares Nwanna:
Kevin Soares bụ aha ya. Ọ bụ nwanne okenye nke Cedric, onye nyeere ndị na-agba ọsọ aka ịmatakwu banyere ụkpụrụ ndụ.
N'adịghị ka nwanne ya nwoke, Kevin weere ụzọ ọrụ dị iche iche, ọ dịkwa mma na ya. N'ikwu nke a, Cedric bụ onye na-egbo mkpa ezinụlọ. Mụnna Soares abụọ nọ ezigbo nso. Anyị na-ahụ ha ebe a ka ha na-ekpori ndụ n'oge ezumike na Miami.
Njikọ siri ike dị n'etiti Cedric Soares na Kevin, nwanne ya.
Nna nna Cedric Soares:
Onye na-agbachitere Arsenal na-enwebu Granpa, onye ọ masịrị ya. N'ụzọ dị mwute, ọ nọkwaghị. Otu ihe doro anya, ebe ọ bụ na Cedric enweghị ike ichefu nkuzi na ụkpụrụ ndị ọgọ mmụọ ya nyefere n'aka ya.
Zute Nna Nna Cedric Soares. N'ụzọ dị mwute, ọ abịaghị n'oge.
Nne nne ochie Cedric Soares:
Obi dị m ụtọ na Grammy na-arụsi ọrụ ike, n’adịghị ka ọtụtụ ndị ọgbọ ya. Ka m na-ide akwụkwọ Biography a (Machị 2021), ọ gbanwere 88. Cedric na-eme ncheta ọmụmụ ya ụbọchị 23 ọ bụla nke Jenụwarị. Mgbe a dull oge na abụọ ndị a.
Cedric Soares nwere ezigbo mmasị na nne nne ya.
Eziokwu Cedric Soares:
Mgbe anyị na gị so mee njem gaa Bio, anyị ga-eji ngalaba mmechi anyị kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara Full-back. Na-ebughi n'ihu, ka anyị gaa n'ihu.
Eziokwu # 1 - Nkwụnye ụgwọ ọnwa Arsenal na Nkọwa na Nkezi Citizen:
Kemgbe ị malitere ilele Cedric Soares'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Arsenal.
Arsenal rygwọ ọnwa na Pound (£)
Akwụ ụgwọ Arsenal na Euro (€)
Kwa Afọ: £ 3,385,200 € 3,930,477
Ọnwa kwa: £ 282,100 € 327,539
Kwa Izu: £ 65,000 € 75,470
Kwa :bọchị: £ 9,285 € 10,781
Kwa elekere: £ 386 € 449
Nkeji nkeji: £ 6 € 7
Sekọnd ọ bụla: £ 0.10 € 0.12
You mara?… Onye ọ bụla bi na UK na-enweta ,35,000 XNUMX (kwa afọ) ga-arụ ọrụ afọ asatọ iji mee ka Cedric Soares na-akwụ ụgwọ kwa izu na Arsenal.
Eziokwu # 2 - Cedric Soares Profaịlụ (FIFA):
Mgbe ọ lara ezumike nká, ndị na-agba bọọlụ ga-echeta Cedric maka nguzozi na mmegharị ọ butere na egwuregwu ahụ. Ndabere nri buru ibu ma abia n'ike, echiche na nka.
Cedric Soares nwere ụdị egwuri egwu yiri nke kpakpando na-ebili ngwa ngwa dị ka Reece James na Ki-Jana Otú ọ dị.
Eziokwu # 3 - Cedric Soares Religion:
Ndị mụrụ ya nyere ya aha nwata nwoke bụ Onye Kraịst (Cedric), nke pụtara "obiọma" na "ọ hụrụ n'anya". Ọzọkwa, a mụrụ ndị na-agba ọsọ na ezinụlọ Christian-Katọlik. Cedric so na ihe karịrị 80% nke ndị Katọlik Portuguese.
Ihe omuma nke Cedric Soares na-akuzi ndi na agba oso-abia banyere mkpebi onwe onye. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, o nwere ikike nke ịchịkwa ọdịnihu ya.
Site n'enyemaka nke nne na nna ya, nwanne nwoke okenye (Kevin) na ndị nkuzi, Cedric gara n'ihu imezu ogologo oge nwata.
Daalụ maka ịnọnyere Lifebogger ruo ugbu a na akụkọ ndụ nke ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese amụrụ na German.
Ndị otu anyị na-agba mbọ iji izi ezi na izi ezi, Ndị na-agba bọọlụ Portuguese akụkọ. Jiri nwayọ rute anyị nso ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na Bio anyị na Cedric.
Tebụl dị n’okpuru na-enye azịza nke akụkọ ndụ ndị a na-ajụ gbasara Cedric Soares.
Aha n'uju: Cédric Ricardo Alves Soares
Ụbọchị ọmụmụ: 31st nke August 1991
Age: 29 afọ na ọnwa 11.
Ebe amụrụ onye: Singen, Germany
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Alves Soares
Nwanne: Kevin Soares (Nwanne nwoke okenye)
Nwunye: Filipa Brandão
Nwa: Siena Soares
Religion: Kraịst (Katọlik)
Ezigbo Net: 15 nde pound (2021 stats)
Ọnọdụ egwuregwu: Right azụ
elu: 1.72 mita ma ọ bụ 5 ụkwụ 8 sentimita asatọ
Education: Egwuregwu Ndị Ntorobịa nke Sporting CP
Akwụkwọ nkwado Southampton
Jan Bednarek Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ